विप्लवलाई पक्राउ गरी मुद्धा चलाउने प्रहरीको तयारी, घरमा पक्राउ पुर्जी टाँसीयो ! अव के हुन्छ ? - Enepali Online
विप्लवलाई पक्राउ गरी मुद्धा चलाउने प्रहरीको तयारी, घरमा पक्राउ पुर्जी टाँसीयो ! अव के हुन्छ ?
Written by:Enepali OnlinePosted on: February 28, 2018
काठमाडौँ- नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’लाई पक्राउ गर्ने गरी सरकारले तयारी थालेको छ । यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवलाई प्रहरीले पक्राउ पुर्जी टाँस गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलबस्तुले माघ ५ गते वडा प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटालाई पत्र काटेर पक्राउ गर्न भनेको छ । प्रहरी निरीक्षक केशवराज ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा विप्लवलाई पक्राउ गरेर भोजपुर जिल्ला अदालत पठाउन भनिएको छ ।
विप्लवलाई ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थ मुद्दाको कसूरमा गिरफ्तार गर्न भनिएको छ । पत्रमा सात दिनभित्र पक्राउ गर्न नसकिए वारेण्ट बदर नभएसम्म खोजतलास गरी पक्राउ गर्न भनिएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार भोजपुर जिल्ला अदालतको पुस ९ गते चलानी नम्बर ६४३ पत्रअनुसार विप्लवलाई सात दिनभित्र पक्राउ गर्ने पत्रमा भनिएको छ । भोजपुर जिल्ला अदालतले ७० दिने म्याद दिएर पक्राउ गरेर बुझाउन प्रहरीलाई अादेश दिएको थियो । उक्त म्याद सकिएको छ ।
नेपका महासचिव विप्लवका दाइ चन्द्रबहादुर चन्दको कपिलबस्तु शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर ९ स्थित घरमा वारेन्ट जारी गरेको पुर्जी टाँस गरेको छ ।
News, rashiphal, SIDHA KURA JANATA SANGA, VIDEO
Previous Post Previous post: अध्यागमनमा डरलाग्दो सेटिङ : पाँच भारतीय पक्राउ
Next Post Next post: फेरी आयो सहनै नसकिने खबर : बिना सहमति महाकालीमा भारतले चारवटा पुल बनाउँदै, नेपाललाई यस्तो भन्दै दियो यसरी ठाडो जवाफ
सर्वेन्द्र खनालले फेरी गरे ३ करोड नेपालीले सलाम ठोकने काम
Enepali Online December 17, 2017 0
पेस्तोल र गोलीसहित गुण्डा नाइके गणेश लामा पक्राउ
Enepali Online March 14, 2018 0
युएस बंगला जहाज दुर्घटनामा बाँचेका यात्रु सनम शाक्य भन्छन्ः जमिन छुनुअघि नै जहाज थर्रर हल्लिएको थियो
Enepali Online March 12, 2018 0
नेपालमै कमाउछन् विदेशीले महिनामा ४० हजारदेखि ४० लाखसम्म
रंगेहात घुस सहित रबिले समाते नायब सुब्बा हेरौ भिडियो
Enepali Online December 15, 2017 December 15, 2017 0